INGELOSI INANI 222 INTSINGISELO + YESIMBOLI - INANI
Ingelosi Inombolo 222 Intsingiselo yokomoya + uphawu
INTSINGISEKO YOKWENZA 222
Kutheni ndisoloko ndidiniwe
Ngaba ubusebenza nzima kakhulu mva nje? I-Universe kunye neengelosi ziwuqhwabela izandla umsebenzi wakho kwaye zikukhuthaza ukuba uqhubeke, kodwa kulungile ukuba unciphise kwaye uzinike ikhefu. Yazi nje ukuba iinjongo zakho zangoku zilungile kumkhondo kunye nenjongo yakho ephezulu. Ukuthatha ikhefu ukubonisa kuya kunceda ukubuyisela amandla akho kwaye ekugqibeleni ulungelelanise imeko yakho yokugxila ukuba utyale imali kakhulu kwiprojekthi, okanye unokusebenzisa nje ukuphumla! Ukuba isizathu sokuba uzityhalele phezulu kukukhathazeka okanye uloyiko, eli lelona xesha lilungileyo lokugcina inkolo yokuba yonke imizamo yakho imalunga nokuhlawula. Indalo iphela ikucela ukuba ubambe ithutyana kwiinjongo zakho ukuze ubonakalise inyani ngokufumana impumelelo.
Ingelosi inombolo 222 ikubuza ukuba ube nendlela elungeleleneyo kuzo zonke iinkalo zobomi bakho. Zeziphi izinto onokuzenza ukuzisa uxolo ngakumbi kunye nemvisiswano mihla le? Mhlawumbi unokucinga ngokwandisa ishedyuli yakho nolawulo lwexesha? Njani ngokubandakanya ixesha lokuphumla nokucamngca, iyoga, okanye ukuphefumla? Yeyiphi imisebenzi ekwenza uzive unamandla?
Omnye umyalezo osuka kwi-222 kukuhlala ucacile kwidrama kunye nokungakhathali, kubandakanya izihlobo, usapho, iTV okanye enye imithombo yeendaba. Ukuhlala ngaphandle kwedrama kuya kugcina iingcinga zakho kunye namandla acacile. Ngamanye amaxesha sidinga isikhumbuzi esincinci sokuba nangona sinokumthanda loo mntu okanye sizive ngathi sinyanzelekile ukuba sityale imali kwimeko ethile, singathatha indlela yokungathathi cala ngaphandle kokuthatha iingxaki zabo. Umyalezo ovela kwiNdawo iphela kukukhulula nawaphi na amandla amabi kwaye ungavumeli nayiphi na imeko yethutyana ichaphazele imvakalelo yakho okanye umgca wokucinga okuqinisekileyo. Nokuba ithini na imeko, myeke uthembe ukuba yonke into isebenza ngokusemgangathweni, kwaye yeyona nto ilungileyo kubo bonke ababandakanyekayo- kuba NGU!
Ukubona inani lama-222 luphawu lokukhula komntu, ukwanda, kunye namathuba amatsha apho kuya kufuneka ukhethe. Kwaye xa la mathuba efika, sebenzisa ubulumko bakho bangaphakathi, intuition, kwaye ulandele izikhombisi ezimnene ezivela kuMthombo. Konke kulungile, kwaye konke kuyasebenza kuwe!
Eyona nto ilungileyo yokulwa ukuguga kwamehlo ngenxa yama-50s